Ukuhamba ngokuthula kuleli hlobo ngemoto ngalesi sibuko sedashcam / sangemuva sokubuka | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 04/07/2021 16:10 | Kubuyekezwe ku- 04/07/2021 16:16 | General, Izibuyekezo
Kuya ngokuya kujwayeleka ukugqoka i- dashcam ezimotweni zethu. Ngenkathi iziphathimandla zaseSpain zingakathathi isinqumo sokulawula lolu daba, kwamanye amazwe afana neRussia noma i-United States vele bawumkhiqizo ofunwa kakhulu ngabashayeli. Kulokhu sifuna ukukukhombisa enye yama-dashcams athakazelisa kakhulu esibe nethuba lokuwahlola kuze kube manje.
Zitholele nathi isibuko sokubuka esingemuva seWolfbox G840H-1 esine-dashcam nekhamera yangemuva, isibuko sokubuka sangemuva esinesikrini nezici eziningi ongasinika zona. Hlala nathi futhi sizokukhombisa ukuthi lo mkhiqizo oyingqayizivele odonse ukunaka kwethu uqukethe ini.
Cishe cishe njalo, kwa-Actualidad Gadget sinqume ukuhambisana nalokhu kuhlaziywa okujulile ngevidiyo enhle, ngakho-ke ungaphuthelwa ithuba bhalisela isiteshi sethu YouTube Futhi-ke sishiyele amazwana kuvidiyo uma unemibuzo, sizophendula njengenjwayelo, ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka. Ngakho-ke ungasisiza ukuthi siqhubeke sikulethela lokhu kuhlaziywa okuthakazelisayo.
3 Ukufakwa kanye ne-GPS antenna
4 Uhlelo lokurekhoda nokupaka iDashcam
Lesi sibuko sokubuka emuva seWolfbox G840H sigqamile, okuthile okukhulu kunokumaphakathi kwezibuko esizibona nsuku zonke, futhi lokho ukuthi ine-screen esingu-12 inch. Isibuko sokubuka emuva sihlala amasentimitha angama-34 x 1 x 7, ngakho-ke ngokuqinisekile sizokuba sikhulu kunesibuko sakho sangemuva esihlanganisiwe. Inentengo ethakazelisa kakhulu ku-Amazon, bheka.
Esimweni sethu siyikhweze esibukweni sokubuka ngemuva sePeugeot 407 futhi siyimboza ngokuphelele. Yenziwe ngengilazi eveza okuncane, okuzosivumela ukuthi sibheke isikrini lapho sifuna, noma siyisebenzise njengesibuko esijwayelekile. Onqenqemeni olungaphezulu sizothola ukuxhumana esizokhuluma ngakho ngokuhamba kwesikhathi, kwesingezansi kunkinobho eyodwa yokuvula / yokuvala yesikrini nedivayisi ephelele, nangemuva ikhamera enkulu ezosebenza njenge-dashcam, enohlelo oluzosivumela ukuthi silungise inkomba yokuqopha.
Lolu hlelo lufaka iprosesa eyi-dual-core ARMCortex A7 enamandla we-900 MHz, ngaphezulu kokwanele ukusebenza kwesibuko seWolfbox esenza imisebenzi yaso ngaphandle kokulahla bese sivuleka ngokushesha uma sesiqale ukushayela. Asinalo, yiqiniso, ulwazi oluphathelene namandla we-RAM efakwa yidivayisi. Ngokwengxenye yayo, sinesifundi sekhadi le-MicroSD, lokhu kufakwe namandla angama-32 GB futhi isibuko sokubuka emuva sizophatha ukugcina nokusula okuqukethwe ngokuya ngokuhlelwa okwabiwe.
Ikhamera yangaphambili: I-Sony 5MP IMX415 enesinqumo esingu-2,5K
Ikhamera yangemuva: Ukulungiswa kwe-2MP FHD
Sine-antenna ye-GPS yangaphandle efakiwe kuphakheji, kanye nekhamera yangemuva enesixazululo esingu-1080P esinokusekelwa okuhlukahlukene kuye ngezidingo zethu. Isikrini, esithinta ngokuphelele, sinesisombululo se-FHD ngaphezu kokwanele ukwenza imisebenzi yansuku zonke. Ngokwengxenye yayo sine-G-Sensor lokho kuzokwenza ukuqoshwa lapho kuthola izingozi, kanye ukuqapha ukupaka Uma siyilungisa kumthombo wamandla waphakade oyivumelayo, kuzoya ngohlobo lokufaka esikwenzayo ngaleso sikhathi.
Ukufakwa kanye ne-GPS antenna
Ukufakwa kuzoba lula kakhulu kunalokho esasikucabanga. Ngokuqondene nesibuko sokubuka ngemuva, simane sililungise ngamanye ama-washer enjoloba afakwe ebhokisini kwisibuko sethu sangemuva futhi sizolungiswa kahle. Manje thinta izintambo, siqala nge-miniUSB, engincoma ukuthi udlule endaweni efanele yemoto, Simane sifaka ikhebula kusuka phezulu, lifihliwe ngemuva kwekhanda lekhanda, ngokufanele (ngincoma ukubukela ividiyo noma ukufunda imiyalo ephaketheni) kolunye lwezibani zemoto.
Manje sesithola i-antenna ye-GPS, Ixhunywe ngenye imbobo ngale njongo. I-antenna ine-3M tape, ngakho-ke ngincoma ukuyinamathisela engilazini yesivikelo somoya ukuthola imiphumela engcono kakhulu.
Ekugcineni, ikhamera engemuva, ikhebula elingamamitha ayi-6 lifakiwe elizokwanela ezimweni eziningi. Sifaka ikhebula ngokusebenzisa i-upholstery size sifike ngemuva. Sidlulisa ikhebula emgodini wesibani sepuleti selayisense bese sinamathisela ikhamera yangemuva endaweni emaphakathi kukabhampasi kupuleti lelayisense uqobo ngaphandle kokuyimboza. Manje dlala xhuma ucingo olubomvu ocingweni olufanayo olunikeza amandla ekukhanyeni "okuphambene", ngale ndlela ikhamera izokwenza kusebenze imigqa yokupaka. Ngaphansi kwamahora amabili bekufanele ngabe usuqede ukufakwa okuphelele. Ngalezi zinyathelo ekugcineni uhlelo sizolufaka.
Uhlelo lokurekhoda nokupaka iDashcam
IDashcam izokwenza ukuqoshwa kwe-loop ngokuya ngezilungiselelo zethu, singaguqula izingxenye eziphakathi kwemizuzu eyi-1 nengu-5. Sinobuchwepheshe be-WDR egwema ukungafani namalambu asebusuku ukuze kugcinwe ukurekhoda okucacile. Ukuba G-Inzwa, ukuqoshwa kuzogcinwa futhi kuvinjelwe lapho kuthola ukunyakaza okungazelelwe, okufanayo kungenziwa uma senza "ukuthepha kabili" esikrinini.
Uma sixhume ikhebula elibomvu kumanje wokukhanya okuguqukayo, lapho sethula i- «R» zizovela olayini bendawo yokupaka esibukweni sokubuka sangemuva, okumele siqale silinganise ngesandla (ngokuthinta isikrini) ukuze isinikeze umphumela othembekile. Ngaso sonke isikhathi sizokwazi ukukhetha ukuthi siyibona yini ikhamera yangemuva noma yangaphambili esikrinini, futhi sebenzisana nokukhanya kwaso ngokushelela ohlangothini lwesobunxele lwesibuko.
Ngokuqondene ne-GPS, Uma siyifake kahle, izosinikeza ukuxhumanisa kwendawo lapho siqopha khona futhi izosikhombisa ijubane ngqo ngesikhathi sangempela engxenyeni engezansi kwesokunxele kwesibuko. Lolu hlelo lusebenze kahle ezivivinyweni zethu. Ukuqoshwa kwasebusuku nakho kube kuhle, ngaphandle kwezinkinga maqondana nalokhu.
Ekuhlolweni kwethu, ikhamera yenze kahle kakhulu. Inombhobho wangaphakathi ngakho-ke sizokwazi ukulungisa ukuthi siyafuna yini ukurekhodwa umsindo noma cha, ngendlela efanayo lapho kuzilungiselelo sizokwazi ukukhetha iSpanishi njengolimi. Uma senze ukufakwa kahle ngokwanele, iqiniso ukuthi sithola imiphumela emihle futhi ngikuthole kuyisistimu yezokuphepha ethakazelisa kakhulu ngentengo engcono kakhulu esingayifaka ukuhamba kuleli hlobo. Intengo yayo ku-Amazon ingama-euro ayi-169, noma ivame ukuba nezaphulelo eziningi zama-euro angama-15.
Kufaka konke ukufakwa
Isebenza kahle futhi ngokushesha
Okunye ukukhanya kukhanya ngaphandle
Mhlawumbe inkulu kakhulu ezimotweni ezihlanganisiwe
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Hamba uzolile kuleli hlobo ngemoto ngalesi sibuko sedashcam / sangemuva sokubuka
Sawubona. Nginentshisekelo esibukweni sokubuka sangemuva se-wolfbox G840H. Ngingathanda ukusebenzisa ikhamera engemuva ukubuka izingane zami ezihlalweni ezingemuva. Ngabe ucabanga ukuthi ngingakufanelekela lokho? Lokhu ngikusho ngokubekwa kwekhamera kanye ne-flip yekhamera (ukuthi ibukeka ibheke phansi). Ngiyabonga
I-Realme Watch 2, indlela esezingeni eliphansi yokungena esezingeni lokugqoka